IDada eliRosti enkonkxiweyo elineNcasa eKhethekileyo eyenziweyo kunye neFactory | HUIQUAN
Iinkukhu ezinkonkxiweyo, i-specialty yaseTshayina. Kusetyenziswa iindlela zokupheka zesiNtu zaseTshayina, idada elicutshungulwayo liphekwa kwangaphambili, linemibala, liqhotyiswe, lisikwe, liphinde liqhotswe, liqhotyiswe ngeendlela ezahlukeneyo zonyaka, litywinwe ngeoyile yesinongo, kwaye lifakwe inzalo. Inyama yedada isosi-bomvu, ithishu ithambile, ibhloko icocekile, amagqabi esuphu ambalwa, kwaye incasa imnandi.
1. Ukukhetha izinto eziphathekayo
Ukuhlela ngesandla kuqinisekisa imigangatho ephezulu yezinto zokutya, ukucocwa okungqongqo, kunye nococeko lokutya.
Yongeza ityuwa kunye neentlobo ngeentlobo zendalo kunye ne-seasonings uku-marinate kunye nokunambitha.
3. Inkqubo yokupheka
Ihuka → ukuayina → ukujinga umbala weswekile → ukomisa kungenanto → ukufaka imibala → ukubhaka → ukubhaka nokuthambisa → imveliso egqityiweyo.
Emva kokuvala inzala ngokungqongqo, ifakwa kwitoti yentsimbi etywiniweyo.
Inkampani yethu yenye yabakhiqizi abakhokelayo abanamava obuchule kwingingqi yasemzantsi-ntshona. Inkampani ineziko lophando kunye nophuhliso, iziko lokuthengisa kunye neworkshop yemveliso yobungcali. Iimveliso eziphambili zenkampani zezi: uthotho lwenyama yenkomo enkonkxiweyo, uthotho lwenkukhu enkonkxiweyo, uthotho lwehagu enkonkxiweyo, kunye nenkxaso ye-OEM/ODM yothotho lokusetyenzwa.
Inkampani inezixhobo zokuvelisa eziphambili kunye nezixhobo zokuvavanya eziphezulu ekhaya nakwamanye amazwe. Ngokusebenzisa iifomula zobuchwephesha, iinkqubo zemveliso yesayensi, izixhobo zokuvavanya ukuchaneka okuphezulu kunye nokulawula ucoceko olulungileyo, iimveliso ziye zaqatshelwa kwaye zathengwa yimveliso emininzi yezempilo kunye neenkampani zokutya ekhaya nakwamanye amazwe. .
Iimveliso eziveliswe yinkampani yethu zahlukene, zizityebi kwiintlobo ngeentlobo, kwaye zibanzi kwiinkcukacha ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zamaxabiso abathengi.
Ngaphambili: Inkukhu yeCurry enkonkxiweyo ilula kwaye ikutya ngokukhawuleza
Okulandelayo: 340g enkonkxiweyo yehagu Isidlo sasemini Inyama
Inkukhu enkonkxiweyo, Inyama yehagu yesidlo sasemini, Inyama yehagu enkonkxiweyo, Iinyama ezinkonkxiweyo zokusinda, I-Canning Beef Brisket, Idada Eliqhotsiweyo elinkonkxiweyo,